I-Cellarman ne-Wine Cellar - Ukuboniswa okulula okulula - izimpawu zedijithali
UFred waseningizimu yeFrance wathenga isoftware yethu yesela lakhe lewayini.
"Nge-Easy Multi Display kulula ukukhuthaza imikhiqizo yami kumakhasimende ami!"
ILes Passagers du Vin iyindawo yokugcina iwayini ebanjwe nguFred eningizimu yeFrance eSaint-Gély-du-Fesc, ngaseMontpellier. Leli sela lewayini lisendaweni emaphakathi nedolobhana futhi lingaphezulu kwesela lewayini elilula ngoba liyindawo yokuhlangana yabangane abafisa ukunambitha amawayini amnandi avela kulo lonke elaseFrance ngemuva kosuku lwabo lokusebenza.
Ukucushwa kwakhe kwangempela kubiza cishe ama-euro angama-550, empeleni, intengo yokuqapha icishe ibe ngama-euro angama-200, inguqulo ye-Easy Multi Display "eyodwa screen" ibiza ama-euro ayi-149, ikhompyutha yakhe encane icishe ibe ngama-euro angama-200 futhi ekugcineni ikhebula elilodwa le-HDMI elizungeze ama-euro ayi-10 ukuxhuma ikhompyutha yakhe encane ayibheke.
Njengoba kunikezwe ukuthi ikhompyutha yakhe encane inamachweba amabili e-HDMI, uFred uzokwazi ukubonisa kuma-monitors amabili. Uzodinga nje ukuthenga esinye isibonisi futhi athuthukise inguqulo yakhe yangempela ye- "screen eyodwa" ye-Easy Multi Display iye kweye- "standard" ukuze abonise kanyekanye kubaqaphi ababili!
Les Passagers du Vin iwebhusayithi
UFred wayefuna njalo izinsizakalo ezihamba phambili zamakhasimende akhe afunayo futhi wayeqondise ngokwemvelo ku-Easy Multi Display ukukhuthaza amabhodlela akhe ewayini amahle kakhulu!
Wayefuna ukufaka isoftware elula, esebenza kahle futhi esheshayo. Ngakho-ke i-Easy Multi Display ibiyisixazululo esifanelekile ngoba umkhiqizo wethu unamandla kodwa futhi kulula futhi ukufaka nokusebenzisa. Ngemuva kwehora elilodwa ethenge i-Easy multi Display, yayikulungele ukusetshenziswa futhi uFred wakwazi ukwanelisa amakhasimende akhe.
Namuhla, ngokuziqhenya uFred usebenzisa i-Easy Multi Display ngemuva kwekhawunta yakhe ukubonisa izithombe, amavidiyo nesimo sezulu esibukhoma.
Weneliswe yi-Easy Multi Display, manje, ufuna ukuthenga umqaphi wesibili ozosetshenziselwa ukubonisa ukunikezwa okukhethekile ewindini lesitolo sakhe ukuheha abadlulayo.
Khulisa kakhulu ukubonakala kwamabhodlela akho ewayini
Nge-Easy Multi Display, ungagqamisa ngokushesha amabhodlela akho amahle kakhulu ukuze ubambe amehlo wamakhasimende wakho izithombe, amavidiyo nokunye okuningi!